Ụlọ oriri na ọ Newụ Newụ New W ka ị ga -ewere Centerstage na RUNWAY, mee ka obodo ahụ mara mma wee jee ije n'elu ọnwa, naanị na Changsha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ụlọ oriri na ọ Newụ Newụ New W ka ị ga -ewere Centerstage na RUNWAY, mee ka obodo ahụ mara mma wee jee ije n'elu ọnwa, naanị na Changsha
Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News
Tom Jarrold, Onye Nduzi Global Brand kwuru, "W Changsha bụ akara ụlọ nkwari akụ W nke asatọ ga -emepe na China, otu n'ime ahịa kacha emetụta na njem na azụmaahịa, anyị nwere obi ụtọ iweta W Hotels gaa ebe ndị ọzọ gafee mba ahụ." W Hotels zuru ụwa ọnụ. "Obodo dị ka Changsha, ya na ndị bi na ha lekwasịrị anya n'ọdịnihu na ahịa okomoko puku afọ ọhụrụ na-eto ngwa ngwa nke na-achọ ihe ọhụrụ na nke a na-atụghị anya ya, bụ ebe egwuregwu nwere ohere na-enweghị njedebe maka W."
Ọdịnihu nke ụlọ nkwari akụ ka emepere ugbu a.
W Hotels Worldwide ga -enwupụta isi obodo na obodo kachasị ukwuu na mpaghara Hunan, China, na imepe W Changsha taa.
Obodo Hunan Yunda Industry Group, W Changsha, nwere ụlọ nkwari akụ ahụ na-egosipụta mmụọ na-enwu enwu nke obodo ọdịnihu na akụkụ dị iche iche nwere atụmatụ na-akpali akpali na nke egwuregwu sitere na njem mbara igwe.
Ọ dị mfe ịnweta, W Changsha dị n'ime nkeji iri atọ na ọdụ ụgbọ elu Changsha Huanghua, ụgbọ elu nkeji iri na ise na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Changsha South, wee jikọọ ozugbo na Beijing-Hong Kong-Macau Expressway. N'ịbụ onye Cheng Chung Design (HK) Ltd a ma ama mepụtara, W Changsha na -etinye ihe egwu dị egwu na ụdị okike ọhụrụ na -eme ememme Changsha bara ụba na ọgbara ọhụrụ. Na China, a makwaara Changsha dị ka “Star City” aha ya na-akpali akụkọ ụlọ nkwari akụ nke na-egosipụta usoro geometric siri ike jikọtara ya na ihe osise avant-garde nke oge a. Naanị ụlọ nkwari akụ ahụ nyere ya ọrụ, ihe osise dị egwu dị ka usoro Schrodinger's Cat na nrụnye nka Zeta na -enyocha ihe omimi nke eluigwe na ụwa site na oghere W, na -ekepụta nzukọ a na -atụghị anya ya na ụlọ nkwari akụ ahụ niile.
Mgbe ha rutere na W Changsha, akara ngosi W na -ekele ndị ọbịa, na -enwu ka ọ yie elu ọnwa. “Okporo ụzọ nke kpakpando,” ihu igwe mgbasa ozi na-agwakọta dijitalụ, mmekọrịta, na nka ụda, na-ebuga ndị ọbịa na RUNWAY, ụlọ mmanya na-abanye n'ime ime ụlọ, mbinye aka nke ika ahụ, na-agbagharị n'etiti ọha na eze n'ọnụ ụlọ nkwari akụ ọdịnala. N'ebe a, ihe osise "Pepper Man" na -akpọ ndị ọbịa ka ha leli anya ma jukwa anya ihe ịtụnanya nke oghere n'ime ọnọdụ na omenala na omenala Changsha.
Mbata W Changsha, Ime ụlọ, RUNWAY
Ụlọ oriri na nkwari akụ 345 nke ụlọ nkwari akụ ahụ na-enye okomoko ọgbara ọhụrụ na ihe ọhụụ, yana mgbidi na-egosi mbara ala, ụyọkọ kpakpando, na nchọpụta nke nebulae site na “meow eye cabin” ihuenyo LED na-eulatingomi nyocha mbara. Site na 26th ala ruo ụlọ kachasị elu na 28th, akụkọ okpukpu atọ Oke-WOW Suite (ihe ika a na-eme na ntuli aka onye isi ala) gụnyere ihe karịrị otu puku square ebe obibi na ebe ntụrụndụ, gụnyere ogige nkeonwe na ebe igwu mmiri, iji mee ebe mara mma maka ihe omume onwe. ọrụ mbinye aka nke ụlọ nkwari akụ ahụ.
W Changsha na -ekwe nkwa na ọ ga -abụ ebe nri ọhụrụ maka ndị na -eri nri mpaghara nwere ụlọ oriri na ọ threeụ threeụ atọ na ebe mmanya na -aga. TROPICS, ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ụbọchị niile, na-enye ahụmịhe imikpu ya na kichin nwere echiche na-enye nri mpaghara na nke mba. SHINN YEN na -eme ememme Changsha site na iri nri na nka, na -enwe ọmarịcha ụzọ nri Hunanese nke na -egosi ihe ụtọ mpaghara. N'uhuruchi ọ bụla, ihe nkiri cabaret na -atọ ụtọ na ihe nkiri ọdịnala Hunan na -eme ka ahụmịhe iri nri ka mma. N'abalị, RUNWAY bụ ụlọ mmanya ebe nkwari akụ ahụ ebe ndị ọbịa niile na -aga ebe etiti ịhụ ma hụ. Ogwe ahụ na -enwu site na egwu egwu na -atọ ụtọ, nke jikọtara ya na mmanya na aka.
Ihe na -enwu enwu na W Changsha
N'ihe karịrị 1,000 square mita nke ohere ọrụ gafee ụlọ ise na -agbanwe agbanwe, W Changsha na -enye ohere enweghị njedebe maka ịnabata ma ọrụ ma nnọkọ oriri. N'ime ebe a na -eri nri, ihe osise grafiti na nka “Fist Bump” - ngosipụta mba ụwa nke ekele ekele - na -echere ndị ọbịa ka ha na -ezukọ tupu ememme mmụọ. Ụlọ nzukọ ọ bụla na -arụ ọtụtụ ọrụ ma nwee teknụzụ nka ọdịyo ọhụụ na -emegharị maka ihe omume chọrọ. N'etiti nzukọ, ndị ọbịa nwere ike iji ezumike na W Recess, ihe oriri mbụ nke ụlọ oriri na ọ takeụ coffeeụ na -a breakụ kọfị na ihe ọ diverseụ diverseụ dị iche iche na nhọrọ nri emebere iji bulie ihe omume ọ bụla.
DETOX. RETOX. Megharịa.
Ka emechara ọrụ ma ọ bụ gwuo egwu, ndị ọbịa nwere ike ịlaghachi azụ n'akụkụ ọdọ mmiri na-eche echiche ma ọ bụ mee mgbawa na WET®, ọdọ mmiri sara mbara nke nwere ihe osise atọ 'Space Cat'. Ebe a na-eme mgbatị ahụ 24/7, nke a kwadebere nke ọma FIT na-enye ịdị arọ na cardio yana klaasị ịgba egwu obi iji mụọ kalori tupu ememme ahụ amalite ọzọ. Maka ndị ọbịa bi na teknụzụ 'Detox.Retox.Repeat' nke ika ahụ, AWAY SPA na -echere iweghachi na ịtụte ọkụ ha.
Henry Lee, Onye isi ala, Greater China, Marriott International kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ibupute ụdị W Hotels dị na etiti China wee gosi anyị nzọụkwụ ọzọ ihe atụ ka anyị na -aga n'ihu ịgbasa Pọtụfoliyo okomoko anyị n'ime ahịa ọhụrụ n'ofe mba ahụ." "Ka njem ime ụlọ na -aga n'ihu na -ebuli ike dị ukwuu, anyị na -ewetara ụdị ọhụụ na -atọ ụtọ dịka W na ebe ntụrụndụ mba na -apụta."
Maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ iji mee ndoputa, gaa wchangsha.com.